Ny fitaovana ITO dia fitaovana semiconductor karazana N, izay ahitana ny vovon-tsakafo ITO, kendrena, Mametaka conductive sy sarimihetsika conductive mangarahara ITO. Mizara roa ny fampiharana lehibe ao aminy: fisehoana amin'ny tontonana (FPD) orinasa, toy ny fampisehoana kristaly ranoka (LCD), fampisehoana transistor sarimihetsika manify (TFT-LCD), fampisehoana electroluminescent (ny), fampisehoana emission an-tsaha (NIEZAKA), jiro elektro-biolojika mamoaka fisehoan'ny tontonana fisaka (OELD), fampisehoana plasma (PDP), Sns; indostrian'ny photovoltaic, toy ny sela solar-film; vera miasa, toy ny vera taratra infrared, fitaratra anti-ultraviolet toy ny vera rindrina ambainy, fiaramanidina, fiara fitaratra anti-zavona fiara, saron-tava sy vera Faritra telo lehibe toy ny kapila karazana.
Ny fangatahana ao an-trano amin'izao fotoana izao amin'ny kendrena ITO dia momba 150 taonina.amin'ny fampiroboroboana ny toekarena ao Shina sy ny fampitomboana ny fizarazaran'ny asa manerantany, maro ny mpanamboatra fisehoan'ny tontonana fisaka any Japon, TAÏWAN, ary i Korea atsimo dia namindra ny tobim-pamokarana ho any Shina tanibe. Any aoriana, Ny tanibe Shina dia ho lasa ivon-toeram-pamokarana LCD lehibe indrindra eran-tany. Tombanana fa ny tinady ao an-trano amin'ireo fitaovana kendrena ITO ao 2012 hihoatra ny 500 taonina.
Ho an'ny famatsiana ireo fitaovana kendrena ITO, ireo mpamatsy lehibe indrindra dia avy any Japon. Anisan-dry zareo, Japan Energy, Japan Mitsui Mining Corporation, ary Japan Tosoh dia misy mihoatra ny 80% ny tsenan ITO..
Manaraka: Fa maninona no milatsaka ny sarimihetsika vokatra mandritra ny firakofana vakum ？？